Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena: nitora-jofo indray ny lakrimozena | NewsMada
Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena: nitora-jofo indray ny lakrimozena
Taorian’ny teny Ankatso, afakomaly, niraradraraka indray ny grenady lakriomozena, nafafin’ny mpitandro filaminana tamin’ireo mpampianatra mpitokona saika hiditra haneho ny tsy fahafaham-pony, tao amin’ny minisiteran’ny Fanabveazam-pirenena, omaly.
Tapaka nandritra ny fotoana maharitra ny lalana omaly vokatry ny sakoroka tetsy amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Mpampianatra maromaro no sempotry ny baomba mandatsa-dranomaso nataon’ireo mpitandro filaminana ka safotra sy nifamonjen’ireo namany. Ny sasany nentina tamin’ny toeram-pitsaboana mihitsy.
Nikatona ny vavahadin’ny minisitera ka tsy afaka niditra tao ny mpampianatra raha nikasa ny haneho ny tsy fahafaham-pony tamin’ny valin-kafatry ny minisitera. Mpitandro filaminana maro avy amin’ny Emmo/Reg anefa no efa niantrana, na tao anatiny na tety ivelany.
Nampitroatra ny mpampianatra izany ary vao maika mampihenjana ny tady eo amin’izy ireo sy ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena izany.
Tsy nisy velively ny marimaritra iraisana eo amin’ny mpampianatra sy ny fanjakana manoloana ny fitakiana hahafahana mamerina amin’ny laoniny ny fampianarana manerana ny Nosy. Nisy ny fihaonan’ny vaomiera manokana izay natsangana avy amin’ny mpampianatra niaraka tamin’ny ekipa teknikan’ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena ny talata teo. Tsy nisy ny zavatra tapaka. Tsy manana vahaolana ny ekipan’ny minisitera sady tsy nahatapaka ahitra.
Gaga ny rehetra ny harivan’ny talata teo raha nahita ny ministra tao amin’ny fahitalavitra tsy miankina nilaza fa « nisy zavatra nifanarahana ». Milaza ny vaomiera manokana fa na ny ministra nofitahin’ireo solontena teknisianina nalefany nifampidinika tao, nahitana ny Daf, ny DPE, ny Chef sy ny sampandraharaha ao amin’ny DRH ka nampandaingan’izy ireo teo imason’izao tontolo izao sy ny mpampianatra rehetra, na ny ministra mihitsy no nisafidy hilaza zavatra tsy marina raha toa ka nanao tatitra mazava taminy ireo solotena nalefany.
Tsy mifanakaiky ny ady varotra
Nilaza ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Horace Gatien, omaly fa tsy misy miova ny datin’ny fanadinam-panjakana. Novalina amin’ny ampahany ny fangatahan’ny mpampianatra. Hisitraka tambin-karama 25.000 Ar ny mpampianatra rehetra manomboka ny volana oktobra 2018. Hiampy tambin-karama manokana 25.000 Ar izany amin’ny janoary. Amin’ny 2020 kosa, hiampy 50 000 Ar ireo tambin-karama rehetra ireo satria any vao ho ampy ny tetibola hahafahana mameno izany. Ny fandraisana mpiasam-panjakana amin’ny 2019 vao misy ka 8.000 isa eo ho eo ny horaisina. Ireo mpampianatra nivoaka tao amin’ny CRINFP dia hosokajina ho « catégorie » 3 sy 4, amin’ny taona 2019. Ny « bonification » ho an’ny Fram mbola hodinihina.
Raha fintinina, 5% tamin’ny fangatahana ihany no voavaly raha io soso-kevitry ny fanjakana io. Tsy neken’ireo vaomiera avy amin’ny sendika ny soso-kevitr’ireo teknisianina.
Mitohy anio ny tolona etsy Antanimbarinandriana.